Mabhuku aLorenzo Silva mucherechedzo mumhando yemutikitivha. | Zvazvino Zvinyorwa
Lorenzo Silva: akanyorwa mabhuku
Munyori Lorenzo Silva.
Kuisa mumainjini ekutsvaga "Lorenzo Silva mabhuku" ndeyekuwana akanakisa eanoongorora, uko chiito uye chakavanzika ndiko kudya kwezuva. Munyori akaberekerwa muMadrid, Spain, musi waChikumi 7, 1966. Silva akatanga kufarira mabhuku kubva pazera diki kwazvo, uye zvaakaita mutsamba zvave zvekuti mumakore apfuura mazhinji emabasa aakaburitsa akadudzirwa Italian, Russian, ChiGerman, French, Arabic uye Catalan.
Lorenzo akawana kuzivikanwa pasirese nekuda kweanoongorora ake eutikitivha, nyaya yakakurumbira ndeye Iye asingashiviriri alchemist (1999). Iri basa rakabata kutarisisa kwevechidiki vakawanda uye rakafanirwawo nemubairo weNadal muna2000. Vavakudzi venganonyorwa idzi vaive varindi vainzi Virginia Chamorro naRubén Bevilacqua.
2 Kutanga kwebasa rake rekunyora uye kutanga kuzivikanwa
3 Bevilacqua uye Chamorro
4 Pakati perudo, basa nemubairo
5 Mabhuku anoshanda nehama dzako
6 Lorenzo Silva: akaratidzwa mabhuku (akatorwa)
6.1 Iye asingashiviriri alchemist
6.2 Nyika iri kure yemadziva
6.3 Kuneta kwevaBolshevik
7 Mimwe mibairo uye mutsauko
Silva akaberekerwa munharaunda yemuzinda weSpain unonzi Carabanchel, kunyanya muwadi yekuberekerwa yechipatara chekare cheGómez Ulla. Vabereki vake vaive Juan Silva naPaquita Amador. Pazera ramakore mashanu akatamira kudunhu reLatina rinonzi Cuatros Vientos., kuMadrid, kwaakatanga kunyora aine makore gumi nematatu chete.
Munguva yehudiki hwake akanyora achinetseka, uye kubvira panguva iyoyo, akaona mabhuku sebasa rake. Muna 1985 akaenda kunogara kuGetafe, inova imwe yenzvimbo dzinodiwa nemunyori uye kwaakatsaurira trilogy. Gare gare, akapedza kudzidza mumutemo kubva kuComplutense University yeMadrid.
Munyori akafunga kudzidza zvemutemo nekuti akafunga kuti ndiro basa raizomuunzira mikana yakanaka Munguva iyi makore Lorenzo mudiki akawana ruzivo rwakamubatsira kunyora mabasa ake. Muna 1990 akashanda semupi wezano wemutero uye muna 1991 seakaunzi yemabhuku.
Kutanga kwebasa rake rekunyora uye kutanga kuzivikanwa
Lorenzo Silva akaenderera mberi nekudzidzira mutemo mune imwe kambani yesimba muna 1992. Munguva iyi akaburitsa zvinyorwa zvakaita se Mbudzi isina violets (1995), Icho chinhu chemukati (1996) uye mu gore rawakaburitsa Kuneta kwevaBolshevik (1997) aive wekupedzisira mubairo weNadal.
Nyaya yekutanga yaakaburitsa nezvevarindi Bevilacqua naChamorro yaive Nyika iri kure yemadziva (1998), gore rakatevera mwanasikana wake Laura akazvarwa uye muna 2000 akahwina mubairo weNadal Iye asingashiviriri alchemist. Ino nguva yaive yakanaka kumunyori, saka akakumbira zororo rekusavapo muna 2002, akarega kushanda segweta uye akazvipira kuita zvekunyora chete.
Bevilacqua uye Chamorro
Aya mavara ndiwo protagonists eLorenzo Silva's tsotsi akateedzanaVaviri vakafamba pamwechete kuburikidza neSpain vachiongorora mhando dzese dzekuuraya. Pakutanga Bevilacqua aisada kushanda naChamorro; asi gare gare akawana ruremekedzo rwemukuru.
Ruben Bevilacqua ("Vila") murume akatendeka uye asina mhosva, muUruguay uyo akaenda kuSpain naamai vake, mushure mekunge baba vake vavasiya. Aive nemwanakomana waanochengetedza hukama hwakanaka naye, asi haamushanyire nguva dzose pabasa rake.
Virginia Chamorro iye sajeni wechidiki izvo zvinovanza kuda kwake kweastronomy. Ane makore makumi maviri nemana, uye kunyangwe hazvo baba vake vaive musoja, aive neruzivo rushoma mumunda paakatanga kushanda naVila. Iye mukadzi anonyara uye mune dzese nyaya iye akatanga kuve anowedzera kubuda.
Hukama hwaVila naChamorro hwakagadziriswa nenzira yakanaka mukati memakore gumi nemashanu apfuura munhau. Chokwadi chekushanda pamwe kwenguva yakareba chakaita kuti kubatana kwevatambi kusvike padanho rekunzwisiswa pasina mazwi. Nechekare nhasi kwanhasi Bevilacqua naChamorro vanga vari mumabhuku echiSpanish kwemakore makumi maviri.
Pakati perudo, basa nemubairo
Muna 2001 Lorenzo Silva akasangana naNoemí Trujillo kuchitoro chemabhuku cheLaie muBarcelona. Pakutanga kwehukama hwavo, Lorenzo akaita firimu vhezheni ye Kuneta kwevaBolshevik pamwe chete nemunyori uye director Manuel Martín.
Uku kuchinjika kwakagashira kusarudzwa kweakanakisa akashandurwa screenplay kubva kuGoya Award muna 2004 uye María Velarde, aive protagonist yemufirimu, akahwina mubairo weakanakisa mutambi mutsva. Makore mana mushure mekugamuchira aya mazita, Muna 2008, zviri pamutemo, Lorenzo akaenda kunogara naNaomi.
Lorenzo Silva naNoemi Trujillo.
Mabhuku anoshanda nehama dzako
Lorenzo Silva akanyora nemwanasikana wake Laura bhuku rakanzi Mutambo wevhidhiyo wakatarisana. Zano renyaya iyi rakagadzirwa nemukadzi mudiki, uye nerubatsiro rwababa vake ivo vakagadzirisa uye vakaburitsa muna 2009. Makore mana mushure mechiitiko ichi, Nuria, hanzvadzi yaLaura, akazvarwa.
Lorenzo anyora nemukadzi wake zvina zvematsotsi, muna 2013 vakaburitsa Suad uye vakagashira mubairo weLa Brújula. Muna 2016 vakaburitsa Hapana chakasviba: kesi yekutanga yemutikitivha Sonia Ruiz; muna 2017 Muzinda waPetko uye makore maviri gare gare Kana uyu ari mukadzi. Basa rako rakanaka uye richangopfuura izvo iri pakati pezvakakura zvinyorwa zveSpanish zvinyorwa.
Lorenzo Silva: akaratidzwa mabhuku (akatorwa)
Heano mamwe akatorwa kubva pamabhuku akakurumbira naLorenzo Silva:
Iye asingashiviriri alchemist
Chitsauko chekutanga: Kunyemwerera kwakanaka.
Mamiriro acho aive asina kana kugadzikana. Mutumbi wanga wakatarisana pasi, mawoko akatambanudzwa kusvika pakureba kwawo kwese uye mawoko akasungirirwa kumakumbo emubhedha.
“Chiso chake chakange chakatendeukira kuruboshwe uye makumbo ake akakotama pasi peguvhu. Iwo magaro akasimudzwa padiki pazvitsitsinho uye pakati pawo pakamira, nekuda kwekukombama kwavo kusisina simba, inoyevedza red rabha pole yakakwidzwa nepiniki pomponi ”.
Nyika iri kure yemadziva
"Ndozvandaida kuziva, kusvika pamwero waunouya nevhu rakadyiwa nezvawakaudzwa nachangamire." Ini ndinotsunga kukupa zano, mudiwa, uye kwete nekuda kwezvandinopfeka pabhedi uye iwe usina kupfeka, asi nekuti ini ndiri mukuru kwauri.
“Edza kutsvaga zviri kudiwa nevakuru vako wozviuraya iwe kuti uzviwane, asi uzviite sezvaunoona zvakakodzera, kwete kuti zvinoita sei kwavari. Mutungamiriri anoda mhondi uye isu tichamupa. Maitiro acho ari kwatiri, mukati memiganhu yakatemerwa isu ”.
“Ini ndaisagara ndiri mukomana ane mweya pakati pemabhora. Kwemakore mazhinji handina kana kutuka, uye ini ndaitoshandisa yakawanda uye ndosarudza dura remazwi kune mamwe akawanda.
"Zvino ndafunga kuti hupenyu haukodzere mazwi anodarika mazana mashanu uye kuti akakodzera mazwi ekutuka, asi hazvirevi kuti haasati ambopfuura kubva pano, asi kuti ndasvika pano."
Lorenzo Silva: akasarudzika mabhuku.
- Destino Infantil-Apel.les Mestres Mubayiro 2002-2003 (Laura nemoyo wezvinhu).
- Primavera de Novela Mubairo muna 2004 (Kadhi chena).
- Honorary Civil Guard muna 2010.
- Algaba Essay Mubairo muna 2010 (Serene Mune Ngozi: Iyo Nhoroondo Yekushanya kweiyo Civil Guard).
- Nhengo yeRukudzo rweRuzhinji Raibhurari yeCarabanchel muna 2012.
- Planet Mubairo muna 2012 (Mucherechedzo wemeridian).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Lorenzo Silva: akanyorwa mabhuku